Pc မှာ internet data ချွေတာနည်း - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ > Pc မှာ internet data ချွေတာနည်း
Pc မှာ internet data ချွေတာနည်း
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 9:05 PM ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ
[ZawGyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် Windows 10 မှာ Internet Data လေလွင့်မှုသက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ???
Internet ကို Package ဝယ်ယူပြီးအသုံးပြုပါခင်ဗျ
Windows 10 ဟာ Windows 8, 8.1 တွေထက် Data စားသုံးမှုက3ဆကျော်တာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း Internet Data ချွေတာချင်တဲ့အခါ Windows 8.1 ကိုသာပြောင်းသုံးနေခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကိုသိပ်ဘဝင်မကျတာကြောင့် Internet Data စားသက်သာအောင် မလိုအပ်တဲ့ ဘယ် Settings တွေ Background Data တွေပိတ်ရမလဲ ဆိုတာ အမြဲစမ်းသပ်လေ့လာခဲ့ရင်းအောက်ပါနည်းလမ်းကိုရခဲ့တယ်ဗျ။ Windows 8, 8.1 တွေလိုမျိုး Data စားသုံးမှုနည်းပါသွားစေမယ့်နည်းလမ်းတွေကတော့...
၁။ Windows Update Services ကိုပိတ်ပါ (Windows Logo+R >> Type "services.msc" and Enter နှိပ်ပြီး Services ထဲက Windows Update မှာ Double click နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Startup type မှာ Disable ရွေး Save လိုက်ပါ။
၂။ Defer Windows Updates (Settings >> Update & Security >> Advanced options >> Choose how updates are delivered >> Updates from more than one place ကို On ပါ။ ပြီးရင် PCs on my local network ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ)
၃။ Turn off Background Apps (Settings >> Privacy >> Background apps မှာ Off ပေးလိုက်ပါ)
၄။ Disable PC Synchronization (Settings >> Accounts >> Sync your settings >> Sync settings ကို Off ပေးပါ)
၅။ Set connection as metered (Settings >> Network & internet >> Wi-fi >> မိချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Wifi name ကို Click ပြီး Set as metered connection ကို On ပေးလိုက်ပါ။
၆။ Deactivate Live tiles (Windows Key
Icon ကိုနှိပ်ရင် Start Screen ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီက live feed app တွေပေါ် Right Click >> More ကနေ Turn Live Tile off ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ)
၇။ Disable Auto Update Offline Maps (Settings >> Offline maps >> Metered connections ကို On ပေးလိုက်ပြီး Automatically update maps ကို Off ပေးလိုက်ပါ)
၈။ Disable MS store Auto Update (Open Microsoft Store >> Click on See more (...) >> Settings ကိုသွားပြီး App updates, Live Tile, Video Autoplay တွေကို Off ပေးလိုက်ပါ)
၉။ Disable Onedrive (အကယ်၍ Onedrive ကိုမသုံးလို ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Right click on Taskbar >> Task Manager >> Stratup >> Microsoft OneDrive ကို Disable လုပ်ထားလိုက်ပါ)
အထက်ကအချက် (၉)ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါ Windows ကို တကြိမ် Restart ချပြီး သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ မလိုအပ်ပဲ Internet Data လေလွင့်ကုန်ကျမှုတွေ များစွာလျော့နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။
Post By Ko Yan
[Unicode]ဖွငျ့ဖတျရနျ Windows 10 မှာ Internet Data လလှေငျ့မှုသကျသာအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ???
Internet ကို Package ဝယျယူပွီးအသုံးပွုပါခငျဗြ
Windows 10 ဟာ Windows 8, 8.1 တှထေကျ Data စားသုံးမှုက3ဆကြျောတာ အားလုံးသိပွီးဖွဈမှာပါ။ ကိုယျတိုငျလညျး Internet Data ခြှတောခငျြတဲ့အခါ Windows 8.1 ကိုသာပွောငျးသုံးနခေဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါကိုသိပျဘဝငျမကတြာကွောငျ့ Internet Data စားသကျသာအောငျ မလိုအပျတဲ့ ဘယျ Settings တှေ Background Data တှပေိတျရမလဲ ဆိုတာ အမွဲစမျးသပျလလေ့ာခဲ့ရငျးအောကျပါနညျးလမျးကိုရခဲ့တယျဗြ။ Windows 8, 8.1 တှလေိုမြိုး Data စားသုံးမှုနညျးပါသှားစမေယျ့နညျးလမျးတှကေတော့...
၁။ Windows Update Services ကိုပိတျပါ (Windows Logo+R >> Type "services.msc" and Enter နှိပျပွီး Services ထဲက Windows Update မှာ Double click နှိပျပါ။ ပွီးရငျ Startup type မှာ Disable ရှေး Save လိုကျပါ။
၂။ Defer Windows Updates (Settings >> Update & Security >> Advanced options >> Choose how updates are delivered >> Updates from more than one place ကို On ပါ။ ပွီးရငျ PCs on my local network ကိုရှေးပေးလိုကျပါ)
၃။ Turn off Background Apps (Settings >> Privacy >> Background apps မှာ Off ပေးလိုကျပါ)
၄။ Disable PC Synchronization (Settings >> Accounts >> Sync your settings >> Sync settings ကို Off ပေးပါ)
၅။ Set connection as metered (Settings >> Network & internet >> Wi-fi >> မိခြိတျဆကျထားတဲ့ Wifi name ကို Click ပွီး Set as metered connection ကို On ပေးလိုကျပါ။
Icon ကိုနှိပျရငျ Start Screen ပျေါလာလိမျ့မယျ။ အဲဒီက live feed app တှပေျေါ Right Click >> More ကနေ Turn Live Tile off ကိုနှိပျပေးလိုကျပါ)
၇။ Disable Auto Update Offline Maps (Settings >> Offline maps >> Metered connections ကို On ပေးလိုကျပွီး Automatically update maps ကို Off ပေးလိုကျပါ)
၈။ Disable MS store Auto Update (Open Microsoft Store >> Click on See more (...) >> Settings ကိုသှားပွီး App updates, Live Tile, Video Autoplay တှကေို Off ပေးလိုကျပါ)
၉။ Disable Onedrive (အကယျ၍ Onedrive ကိုမသုံးလို ပိတျခငျြတယျဆိုရငျ Right click on Taskbar >> Task Manager >> Stratup >> Microsoft OneDrive ကို Disable လုပျထားလိုကျပါ)
အထကျကအခကျြ (၉)ခကျြကိုလုပျဆောငျပွီးတဲ့အခါ Windows ကို တကွိမျ Restart ခပြွီး သုံးကွညျ့လိုကျပါ။ မလိုအပျပဲ Internet Data လလှေငျ့ကုနျကမြှုတှေ မြားစှာလြော့နညျးသှားပါလိမျ့မယျ။
Pc မှာ internet data ချွေတာနည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:05 PM Rating:5[ZawGyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် Windows 10 မှာ Internet Data လေလွင့်မှုသက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ??? ပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ Internet ကို Package ဝ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:05 PM